Soosaarka Calanka Caadiga ah ee ugufiican iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Calanka Gaarka ah ee Farshaxankaaga
Laga soo bilaabo astaamaha, astaamaha naadiga, astaamaha, xitaa sawir gacmeedka ilmahaaga, CFM wuxuu isu rogi karaa calan kasta oo caado ah iyadoo loo eegayo shuruud kasta ee macaamilka. Qaabka xarrago iyo xarrago leh ee calanka caadada ahi wuxuu ka dhigan yahay in ku dhowaad dhacdo kasta lagu sii wanaajin karo badeecadan yar yar ee weli si fiican u samaysan.
CFM waxay ku siineysaa ikhtiyaarro badan oo loogu talagalay Calanka Gaarka loo Sameeyay
Si lagaaga caawiyo inaad abuurto calanka saxda ah ee saxda ah ee aad u baahan tahay, waxaan ku siineynaa fursado kala duwan. Waxaan kuu soo bandhigeynaa qalab aad ka dooran karto si aad ugu haboonaato miisaaniyadaada calamado si gaar ah loo sameeyay iyo inaad bixiso cimri dherer iyo cimri loo baahan yahay, iyadoo kuxiran inaad u adeegsan doontid calamadahaaga daabacan caadadaada muddo dheer, xilliyada gaarka ah oo keliya isticmaalka gudaha oo keliya, ama dibedda loo adeegsado, halkaasoo ay ku dhici doonaan dabaysha, roobka iyo qorraxda.
Gacmo-gashi Pole Custom ah oo gaar ah
Calankeena shaashadda cirifka ee caado waa aalad ku habboon in loogu beddelo astaantaada ama farshaxankaaga xaqiiq duuleysa firfircoon. Daabacaadda dhijitaalka ah ayaa loo ansaxiyay si loo hubiyo in sawirrada iyo midabbada isku murugsan si dhammaystiran loogu daabacan karo xallin sare. Calanadeena cirifka ah ee caymiska ayaa ku habboon waxqabad kasta oo xayeysiin ah waxayna kaa caawineysaa inaad ka kasbato feejignaanta degdegga ah macaamiishaada mustaqbalka daqiiqado gudahood!
Qiyaaso iyo qaabab kala duwan oo loogu talagalay xulashooyinkaaga
Si loo siiyo waayo-aragnimo habboon oo loo habeeyay macaamiisheenna, CFM waxay bixisaa cabirro kala duwan oo caadooyin ah iyo qaabab gaar ah si ay ula kulmaan tilmaamahaaga. Qiyaasaha caadiga ah waxaa ka mid ah 2 'x 3', 3 'x 5', 4 'x 6', 5 'x 8', 6 'x 10', iyo cabbirka caadada ah, sida 60 x 90cm, 150 x 90cm, 90 x 180cm, 1m x 2m, iwm .. sidoo kale waa la heli karaa.
Calan Calan Custom